वनको आम्दानी घट्न थालेपछि चुरे गाउँपालिकाको श्री मसानी विद्यालय संकटमा « News24 : Premium News Channel
कैलाली । कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालय आर्थिक अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा पर्ने श्री मसानी आधारभुत विद्यालय अर्थअभावकै कारण बन्द गनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
वि.स. २०४६ सालमा स्थापना भएको सो आधारभुत तहको विद्यालयमा अहिले कार्यरत शिक्षकहरुलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नभए पछी विद्यालय बन्द गर्नुको कुनै विकल्प नभएको स्थानीयको बुझाई छ ।
सामुदायिक वनको आम्दानीमा आश्रित उक्त विद्यालय पछिल्लो समय वनको आम्दानी घट्न थालेपछि संकटमा परेको हो । विद्यालयमा अहिले झन्डै १ सय ५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन भने ३ जना स्थायी र ४ जना निजी श्रोतबाट गरी ७ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् ।
स्थायी दरन्दीवालाहरुको सरकारबाट तलब भत्ता अउने गरेको भए तापनि निजी स्रोतका ४ जना शिक्षकलाई तलबका लागि मासिक ५० हजार रकम आवश्यक पदर्छ तर स्रोत केही नभएको कारण समस्या भईरहेको विद्यालय व्यवस्थाप समितिले जनाएको छ ।
त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुको पारिश्रमिक दिन विद्यालयलाई अहिले सकस परिहेको छ । लामो समयदेखीको पारिश्रमिक नपाएपछि नीजी श्रोतका शिक्षकहरुले तलब उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । एकातर्फ न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्का तर्फ भएको तलब पनि समयमा पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले धेरै दिन विद्यालयमा यसरी काम गर्न नसकिने शिक जयलाल बोहरले र अमर साउँदले बताए ।
निजी श्रोतका शिक्षकहरुले अहिलेकै अवस्थामा काम गर्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि विद्यालय जोगाउन कठिन हुने देखिएको छ । गाउँपालिकाले केही हदसम्म सहयोग गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजबहादु ऐरले बताए ।
वि.स २०७४ साल देखि कक्षा ८ सम्मको पढाई सञ्चालन भएसँगै ३ घण्टा हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । तर, अहिले पुरानै अवस्था दोहोरिने चिन्ता बढेको स्थानियहरु बताउँछन् । गाउँपालिका र वनको सहयोग पर्याप्त नभएपछि विद्यालय अहिले चन्दा संकलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले विद्यालय समायोजनपछि दरबन्दी मिलान र भौतिक पुर्वाधार निर्माणलाई भने वेवास्ता गरेको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय अधिकांस सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।
यता चुरे गाउँपालिकाले भने पालिका शिक्षक राख्ने बिषयमा पटक पटक छलफल भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ । गाउँपालिका संग पर्याप्त आम्दानीको श्रोत नभएको कारण तत्काल पालिका शिक्षक राख्न नसकिने अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरले बताए ।